Maxaa saaxiibbada Rooble beegsiga u gooni yeelay? | KEYDMEDIA ENGLISH
Maanta waxaa isku day khaarijin ka badbaaday Afhayeenka Xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimuu, kaasoo uu soo gaaray dhaawac culus.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xildhibaanno ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee JFS Soomaaliya, ayaa abuuray su’aalo la xariira sababta loo beegsado shaqsiyaadka saaxiibka la ah Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda, isla-markaasna aan loo bar-tilmaameedsan howlwadeennada xaafiska Farmaajo.
Xildhibaannadan waxa ay muujiyeen shaki xooggan oo la xariira in si gooni ah loo beegsanayo garabka Ra’iisul Wasaraha, iyadoo la adeegsanayo kooxda xiriirka la leh Al-qaacida ee Al-Shabaab, loona fududeynayo bar-tilmaameedsiga warbiihinta diidday kalitalisnimada.
Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah shaqsiyaadka Farmaajo iyo kooxdiisa si adag kaga soo hor jeeday shanti sano ee la soo dhaafay, ayaa ka mid ah dadka qaba shakiga la xariira sababta 50 cisho gudahooda loo beegsaday saaxiibada Ra’iisul Wasaaraha ayaa yiri;
“Saaxiibada Farmaajo cidina ma qarxiso ee kuwa Rooble maxaa loo beegsadaa mar walba. Soo uma muuqato mashruuc siyaasadeysan oo la maalgelinayo. Allaha caafiyo walaalkeen Mohamed Ibrahim Moalimuu Afhayeenka XFS”.
Wasiirkii hore ee Amniga Galmudug, Axmed Macallin Fiqi, ayaa isna sheegay inuu socodo shirqool maleegan oo dad gooni ah ku wajahan, wuxuuna ku taliyay in cid walbaba is ilaaliso intii tabar ah, inta ay masuuliyaadda sheeganayan kuwa aan aqoonta amniga ehelka u ahayn, waa sida uu hadalka u dhigaye.
“Waxaa muuqata shirqoollo lagu beegsanayo rugcadaaga iyo mas’uuliyiinta warbaahinta qaarkood, taasoo u eg mid abaabulan oo lagu cabsi-gelinayo ama lagu aamusinayo codka warbaahinta ka hortimid kalitalisnimada iyo barnaamijyadeeda”.
Masuuliyiintii ugu sarreysay Warbaahinta Qaranka, oo hormuud u ahaa in la mamnuuco waraaqaha sharci darrada ah ee xaafiiska Farmaajo ka soo baxa, ayaa la beegsaday bishii November, markaas oo la dilay agaasimihii Radio Muqdisho isla-markaana la dhaawacay agaasimihii Telefishinka Qaranka.
Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, ayaa la rumeysan yahay in ay hore uga takhaluseen shaqsiyaad ka aragti duwan oo siyaasiyiin, saraakiil iyo odayaal dhqanba leh.